Wasiirka haweenka XFS ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay+(SAWIRRO). | Somali National Television - sntv.so
Home KOONFUR GALBEED Wasiirka haweenka XFS ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada Baydhabo ee xarunta...
Wasiirka haweenka XFS ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay+(SAWIRRO).
Wafdi ay hogaamineyso Wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mr.’s Xaniifa Maxamed Ibraahim (Xaabsade) ayaa maanta safarkeedii ugu horeeyay tan iyo markii xilka loo magacaabay ku tagtay magaalada Baydhabo.
Wafdiga Wasiirada ayaa waxaa Garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo, si weyn ugu soo dhoweeyay Wasiiro xildhibaano iyo qeybaha bulshada ee Maamulka Konfur Galbeed.
U jeedka socdaalka wafdiga ayaa ah u ololeynta xuquuqda haweenka ee siyaasadda dalka iyo xaqiijinta kuraasta dumarka ee golayaasha dowladda gaar ahaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka.
Wasiirka haweenka Koofur Galbeed, oo hor kacaysa soo dhoweynta wafdiga wasiirka ayaa sheegtay in ay ku faraxsan tahay soo dhoweynta wasiirka haweenka Soomaaliya.
“Ololeynta kuraasta haweenka, maadama wadanka uu galay xilli doorasho, halbeega xukuumadda aan ka tirsanahay ee Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ay tahay xaqiijinta kuraasta haweenka, Insha’Allah dhowr maalin ayaa joogi doona, waxaana la kumayaa qeybaha bulshada” ayay tiri wasiir Xaniifa.
Previous articleSafaarada Boqortooyada Sacuudiga ay ku leedahay Dalka Holland oo Weerar Rasaas ah lala beegsaday.
Next articleBiya qabadka Warta degmada Boondheere oo buuxdhaaftay ayaa sababtay in biyuhu gudaha u galaan xaafadaha ka agdhaw+(SAWIRRO).